Launch of project to support older people and those with disabilities affected by COVID-19 - European External Action Service
EEAS > Myanmar (Burma) > Launch of project to support older people and those with disabilities affected by COVID-19
06/07/2020 - 15:16
COVID-19 ရ ောဂ္ါသည် သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားနှင်မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို အထူားအနတ ောယ် ှိရစပပီား ရသဆံိုားမှုနှုေ်ား မှော ရ ောဂ္ါမပင်ားထေ်ရစနိိုင်သည်နှလံိုား၊ ဆီားခ ိျို၊ အသက်ရူလမ်ားရ ကောင်ားဆိိုင် ောရ ောဂ္ါနှင်ကင်ဆောက သိို ေဂ္ိို ရ ောဂ္ါအခံ ှိ သည်အသက်အ ွယ်ကကီား င ်သူမ ောား ကောားတွင် မမင ်မောားသည်ကိိုရတွွဲ့ ပါသည်။
တခ ိေ်တည်ားမှောပင် COVID-19 ကပ်ရ ောဂ္ါရ ကောင်ပံိုမှေ်ဝင်ရငွ ှိမှုနှင်က ေ်ားမောရ ားရစောင ်ရ ှောက်မှုအောား လက်လှမ်ား မီ ေ် အခက်အခ မ ောားမ ှာ ပ ိုမ ိုက ြီးထ ှာြီးလှာသဖြင ့် ယခင့် တည့်ြီး ရိုန့်ြီး န့်လှုပ့်ရ ှာြီးနနရသည်သက်ကကီား ွယ်အိို မ ောားနှင်မသေ်စွမ်ားသူမ ောားအနပေါ် အခ ိျိုားအစောားမညီမျှရသောသက်ရ ောက်မှုမ ောား ှိလောနိိုင်သည်။ COVID-19 ရ ကောင်ရစ◌ျး ားမ ောားလည်ား ပိတ်ထောား ပပီား အမခောားရသော ဝင်ရငွ လမ်ားမ ောားကိိုလည်ား ကေ ်သတ်ခံထောား မခင်ားရ ကောင်သိေ်ားနှင ်ခီရသော လူမ ောားကိို ဆင်ား တွင်ားသိို တွေ်ားပိို နနသ သ ို ှိရေသည်။
ယခို COVID-19 ရ ောဂ္ါကောကွယ်ထိေ်ားခ ျိုပ်ရ ားအစီအစဉ်တွင် က ေ်ားမောရ ားနှင်အောားကစောားဝေ်ကကီားဌောေသည် သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားနှင်မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို ကောကွယ်ရပား ေ် သီားသေ ်အစီအစဉ်မ ောားလိိုအပ်ရ ကောင်ား သတိမပျိုခ ပပီားမြစ် ပါသည်။ ဉရ ောပသမဂ္ဂမှ ပံ ပိိုားသည်ယခိုစီမံကိေ်ားအသစ်မှ တဆင်အမပည်မပည်ဆိိုင် ော သက်ကကီား ွယ်အိို ရစောင ်ရ ှောက် ရ ား အြွ ွဲ့သည် COVID-19 ရ ောဂ္ါကူားစက်ခံ နိိုင်ရမခြွယ်အ ှိဆံိုားသူမ ောားကိို လူမှုအသိိုင်ားအဝိိုင်ားက ပိိုမိိုကောကွယ်ရပားနိိုင် ရ ားအတွက် တိိုက်ရိိုက်ပံ ပိိုားမှုမ ောား လိုပ်ရဆောင်သွောားမည်မြစ်ပါ သည်။
စီမံကိေ်ားမှ COVID-19 အောားရ ှွဲ့တေ်ားမှ ကိုသရပားရေသည်က ေ်ားမောရ ားဝေ်ထမ်ား ၃၆၀၀ ခေ ်နှင်ရစတေော ဝေ် ထမ်ားမ ောား ကိို PPE ဝတ်စံိုမ ောားရထောက်ပံ မခင်ား၊ လက်ရဆားရဘစင်မ ောားတပ်ဆင်ရပားမခင်ား၊ သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောား နှင်မသေ်စွမ်ားသူမ ောား အတွက် သီားသေ်ရစောင်ကည ်လူေောရဆောင်မ ောား တည်ရဆောက်မခင်ားနှင်စီမံခေ ်ခွ မခင်ား တိို အတွက် ပံ ပိိုားရပားသွောားမည ်အမပင် ရဆားခေ်ားမပသ ေ် ခက်ခ ရေသည်ယခိုက သိို အခ ိေ်တွင် အသက်ကယ် မကူားစက်နိိုင် ရသောရ ောဂ္ါ ှောရြွစစ်ရဆားမှု မ ောားနှင်ရဆားရံိုရဆားခေ်ားမ ောားသိို လွ ရမပောင်ားရပားမခင်ားမ ောား ကိိုလည်ား ယခိုစီမံကိေ်ားမှ ဆက်လက် ရဆောင် ွက်ရပား သွောားမည်မြစ်ပါ သည်။ ထိို အမပင် စီမံကိေ်ားအတွင်ား က ေ်ားမောရ ားနှင်အောားကစောားဝေ်ကကီား ဌောေနှင ်အတူ COVID-19
နှင ်ပတ်သက်သည်အသိ ပညောရပားလှုပ် ှောားမှုမ ောားကိို မပျိုလိုပ် ကော မပည်သူလူ ထိုအောား ကိိုယ်တိိုင် COVID-19 ကိို ကောကွယ်နိိုင်ရစ ေ် အသိပညောရပားသွောား မည်မြစ်ပါ သည်။
ထိို မပင် လူမှုဝေ်ထမ်ား၊ ကယ်ဆယ်ရ ားနှင်မပေ်လည်ရေ ောခ ထောားရ ားဝေ်ကကီားဌောေနှင်ပူားရပါင်ားရဆောင် ွက်မှုနှင်အတူ မမေ်မောနိိုင်ငံ ှိ မသေ်စွမ်ားဉီားရ ၅,၀၀၀ ရက ော်ကိိုလည်ား တစ်ဉီားလျှင် က ပ်ရငွ ၃၀,၀၀၀ နှုေ်ားမြင်ရထောက်ပံ ရ ကား တစ်ကကိမ်ရပားအပ်သွောားမည်မြစ်ပါသည်။
“ ဉရ ောပသမဂ္ဂ COVID-19 ကောကွယ်ထိေ်ားခ ျိုပ်ရ ားအစီအစဉ်ဟောဆိို င် ထိိခိုက်အလွယ်ဆံိုားသူရတွကိို မရမ က ေ်ခ ရစြိို အထူား ရသခ ောရအောင်လိုပ်ရဆောင်ထောားပါတယ်။ ဒါရ ကောင်က ေ်ားမောရ ားနှင်အောားကစောားဝေ်ကကီား ဌောေ၊ အမပည်မပည်ဆိိုင် ောသက်ကကီား ွယ်အိိုရစောင ်ရ ှောက်ရ ားအြွ ွဲ့တိို ရဆောင် ွက်မှုကတဆင်အခိုလိို အက ပ်အတည်ား ကောလ မှော သက်ကကီား ွယ်အိိုမ ောားေ မသေ်စွမ်ားသူမ ောားကိို ကူညီရထောက်ပံ ပပီား ကျွန်ိုပ်တိို စည်ားလံိုားညီညွတ်မှုကိို မပသ တော ဂ္ိုဏ်ယူမိပါတယ်” ဟို မမေ်မောနိိုင်ငံဆိိုင် ော ဉရ ောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကကီား H.E. Kristian Schmidt ကရမပော ကောားသည်။
“ သက်ကကီားအမ ိျိုားသောား၊ အမ ိျိုားသမီားရတွေ မသေ်စွမ်ားသူရတွအရပေါ်အခ ိျိုားအဆမမျှစွောသက်ရ ောက်ရေတ မညီမျှမှုရတွဟော COVID-19 န ှာင ့် မမင်သောလောခ ပါတယ်။ ဉရ ောပသမဂ္ဂက ပံ ပိိုားတ ဒီ ေ်ပံိုရငွဟော နိိုင်ငံတစ်ဝေ်ားမှော ှိတ ရ ောဂ္ါကူားစက်ခံ နိိုင်ရမခအမ ောားဆံိုားသူရတွကိို COVID-19 ကရေကောကွယ်ြိို မှေ်ကေ်တ ကကိျိုတင်ကောကွယ်မှုမ ောား လိုပ်နိိုင်ရံိုသောမက ဝင်ရငွေ က ေ်ားမောရ ားရစောင ်ရ ှောက်မှုကိို ှိရစြိို ကူညီ ောမှော အလွေ်အ ားပါပါတယ်” ဟို အမပည်မပည်ဆိိုင် ော သက်ကကီား ွယ်အိိုရစောင ်ရ ှောက်ရ ားအြွ ွဲ့၏ Country Director မြစ်သူ Mr.Godfred Paul ကဆိိုသည်။
ကျွန်ိုပ်တိို အရေမြင်မမေ်မောအစိိုား ၏ COVID-19 ကောကွယ်ထိေ်ားခ ျိုပ်ရ ားအစီအစဉ်မ ောားကိို ပံ ပိိုား ေ်အတွက် က ေ်ားမောရ ားနှင်အောားကစောားဝေ်ကကီားဌောေ၊ ဉရ ောပသမဂ္ဂတိိုေလက်တွ လိုပ်ကိိုင်သွောား ေ် ရမျှော်လင ်ထောားပါသည်။
Letter from Europe Soe Yu Naing is an Erasmus Mundus scholar pursuingamaster's degree in Infectious Diseases and One Health in Spain. He has shared some of his experiences of living and studying abroad in Europe during COVID-19.
အီးယူ၏ မြန်ကူ အရေးပေါ်ငွေသား ရန်ပုံငွေများကို အထည်ချုပ်လုပ်သား ပထမအသုတ် လက်ခံရရှိခြင်းမေလ ၁ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများနေ့တွင် မြန်ကူသည် COVID-19 အကျပ်အတည်း၏ မြန်မာနို်ငငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အလုပ်မှဆိုင်းငံ့ခံ သို့မဟုတ် ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အထည်ချုပ်လုပ်သားများထံ ရန်ပုံငွေပထမအသုတ်ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂရုံး၏ လိပ်စာအသစ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂရုံးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း ရုံးခန်းနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကန်ဒေါ်လာ ၉၈ မီလီယံ [ကျပ်ငွေ ၁၃၄.၅ ဘီလီယံ] ပမာဏရှိသော ကြွေးမြီကို ဆိုင်းငံ့ထားပေးကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂ ကြေညာ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်ထိခိုက်စေမှုကို စီမံကုစားရာတွင် ထောက်ကူပေးရန်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သော ဩစတြိယနိုင်ငံ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ နှင့် ပိုလန်နိုင်ငံတို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက